Systemd-boot: imwe nzira yeGRUB | Linux Vakapindwa muropa
Systemd-boot: imwe nzira yeGRUB
SysV yakadzingwa kubva kuGNU / Linux uye yakatsiviwa ne systemd. Nekudaro, havazi vese vanochida zvakaenzana, uye pakave nekushoropodzwa kuzhinji nezve systemd izvo zvakatotungamira mukugadzirwa kweanotora distros pasina ino yakaoma system ine chekuita zvishoma nekureruka uye uzivi hweUNIX hwaivepo mumasisitimu apfuura. Zvakanaka, kune zvakare bootloadr, kureva kuti, bootloader inoenderana ne systemd.
Una imwe nzira kune yedu inodiwa GRUB uye inogona kubata ese ekutanga maitiro ekugovera kwako. Anonzi systemd-bhuti. Zvakakosha here kutsiva GRUB ne systemd-boot? Iye zvino isu tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezve mairi bootloaders maviri kuti iwe ugone kusarudza kuti ndeipi yaunoda.
Pakutanga systemd-boot yaizivikanwa se gummiboot, mukwikwidzi mutsva kuGRUB inotsigira EFI masisitimu. Muchokwadi, systemd-bhutsu, iri yepamusoro-chikamu system, inosangana neyekuzvarwa bootlader yeEFI pachayo uye inopa a subset yemabasa ekutanga kusarudza iyo inoshanda sisitimu. Panzvimbo iyoyo, GRUB yakasiyana nepfungwa iyoyo, uye inotakura yakawandisa sisitimu yekukupa iwe dzimwe sarudzo dzekutonga sisitimu uye nekugona kukuru.
Kana iri kodhi, iwe unotoziva kuti ese ari maviri akavhurwa sosi, asi mune systemd-bhutsu isoftware ine zviuru zvemitsetse isingatsamire pane yakasara systemd, kunyangwe yakawedzerwa kwazviri nekuda kwekureruka kwayo. Kuva nehukama nazvo, iwo mabhutu anotyaira haazove akafanana nomeclature kupfuura GRUB, asi ichadaidzwa nezita rayo rakanyoreswa musystemd yekumisikidza faira.
Kana iwe uine BIOS, ndokuti, system isina EFI, unotoziva kuti GRUB inogona kushanda mushe, uye kune EFI masisitimu iwo matsva mavhezheni eGUB anoitawo. Asi, systemd-boot inoshanda chete nemaEFI masisitimu sezvo zvinoenderana nazvo. Nezve kureruka, ini ndanga ndati haina kupa sarudzo senge GRUB, inokurumidza nekuda kwekureruka kwayo uye yakasimba, asi inokutadzisa kana zvasvika pakuita manejimendi sezvingaitwe muGRUB usati wawana iyo inoshanda system.
Kune rimwe divi, systemd-bhutsu inoshandisa paradzanisa mafaira ekugadzirisa yeimwe kernel kana inoshanda system iripo, uye zviri nyore kuchengetedza kana paine akati wandei. Saizvozvo, iwe unogona kuteedzera zvakananga mafaira ekumisikidza eesystem nyowani iwe aunoda kubhurawuza mudhairekitori uko mafaera ekugadzirisa aripo ekuwedzera multiboot yeavo matsva masystem.
ResumiendoKana iwe uchida kuwedzera kuchinjika, kumwe kumisikidza / manejimendi chinzvimbo, GRUB ichiri yako yakanyanya kunaka sarudzo Kune rimwe divi, kana iwe uchida chimwe chinhu chiri nyore, chinokurumidza uye chakasimba, chiri nyore kuchengetedza nekugadzirisa, asi pasina zvakawanda zvingasarudzwa, ipapo unogona kusarudza systemd-boot ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Systemd-boot: imwe nzira yeGRUB
GIMP 2.10.10 ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kunonakidza kugadzirisa. Panguva ino chete yeLinux